အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်္ဂလိပ်စကားဆီသို့ -
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 Author Myat Moe	Comment(0)
သူလည်းနားလည်၊ ကိုယ်လည်း နားလည်ရင် ပြီးရော မဟုတ်ဘူးလား😒😒
ယောင်းတို့ရေ အခု အက်မင်တို့ လေ့လာနေကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုတာ အချင်းချင်း ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားသားနဲ့ အပြန်အလှန်ပြောဆိုတတ်ရုံ အဲဒါလေးတင်အတွက် သုံးကြတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆို ကြားခံဘာသာစကားအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အရပ်သုံးစကား (သူနားလည် ကိုယ်နားလည် အပြန်အလှန် ပြောဆိုတတ်ရုံ) မဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့လည်း လိုလာပါပြီ။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုပြီး အခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်မှာပါ။
အရပ်သုံးစကား ပြောနေကျရာကနေ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စကားပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်ရတာကလည်း အရမ်းခက်လှတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သုံးနေကျ စကားလုံးတွေ နေရာမှာ တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ အစားသွင်းပြီး လေ့ကျင့်သွားရုံပါပဲ။
ဥပမာကွာ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြရင် “hey” လို့ပြောကြပေမဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားဖက်ပါတနာတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ “Hello” လို့ ပြောင်းပြောတာမျိုး၊ “okay” အစား “all right” လို့ သုံးတာမျိုးပေါ့။
ဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အက်မင်က ယောင်းတို့ အရပ်သုံးစကားမှာ သုံးနေကျစကားလုံး (၆)လုံးကို ပရော်ရှင်နယ်ကျကျ ဘယ်လိုပြောင်းသုံးရမယ်ဆိုတာလေးကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
(၁) Get in touch (with) => contact
“ဆက်သွယ်သည်” လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ (၂) ခုလုံးကို အရပ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရော၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ် အင်္ဂလိပ်စကားပြောရောမှာ သုံးလေ့ရှိကြပေမဲ့ ပရိုကျကျရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ပိုတိုပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ်ပိုထိရောက်တဲ့ “contact” ကိုသုံးကြပါတယ်။
Casual: I tried to get in touch with you about the Christmas party.
Professional: I tried to contact you about next week’s sales meeting.
(၂) Let (someone) know => inform
အသိပေး၊ အကြောင်းကြားသည်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ “Let (someone) know” ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ အသုံးများကြပေမဲ့လည်း အရေးသားဆိုရင်တော့ “inform” ကိုသာ သုံးကြပါတယ်။
Casual: I will let you know later if I can meet you for lunch.
Professional: Later I will inform you which reports I need.
(၃) Make sure => ensure
သေချာအောင်လုပ်သည်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ စကားလုံး (၂) လုံးစလုံးကို အခြေနေ (၂)ခုစလုံးမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ သိပ်ပြီး ကွာခြားသွားတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ပရော်ဖက်ရှင်ပိုဆန်ချင်ရင်တော့ အရေးမှာ “ensure” လို့သာ သုံးစေချင်ပါတယ်။
Related article >>> တစ်ယောက်တည်းရော အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်လို့ရနိုင်လား?
(၄) Get ready => prepare
သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း (သို့) ရင်းနှီးသူအချင်းချင်း ဟဲ့ ငါတို့သွားတော့မယ် အဆင်သင့်လုပ်ထားလို့ ပြောတဲ့အခါ “Get Ready” လို့ ပြောတတ်ကြတယ်မလား။ ဒါပေမဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ် စကားပြောနဲ့ အရေးမှာဆိုရင်တော့ “prepare” လို့သာ သုံးကြပါတယ်နော်။
Casual: We’re working hard to get ready for our class presentation.
Professional: We’ve been working late to prepare for our sales launch.
(၅) Talk about => discuss
သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အခါ “talk about” ကို သုံးကြပေမဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှာဆိုရင်တော့ “discuss” လို့သာ သုံးကြပါတယ်။ သတိထားရမှာတစ်ခုက “talk” နောက်မှာ “about” လိုက်ပေမဲ့ “discuss” နောက်မှာတော့ “about” မလိုက်ရပါဘူးနော်။ ဒါကို တော်တော်များများက ” I would like to discuss about ….” စသဖြင့် သုံးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ “talk TO someone ABOUT something” နဲ့ “discuss something WITH someone” လို့သုံးရတာကိုလည်း သတိထားရပါမယ်နော်။
Casual : I want to talk to you about the project.
Professional : I would like to discuss the project with you.
(၆) say sorry => apologize
တောင်းပန်ပါတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ “say sorry” ကို ကလေးတွေကို ပြောတဲ့အခါ သို့ တခြား အချင်းချင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောကြတဲ့အခါမှာ သုံးကြပေမဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ သုံးဖို့ကျ အရမ်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်ရာကျပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရေးမှာဆိုတော့ apologize” ကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။
Casual: You should say sorry for making her worry.
Professional: We should apologize for making the customer wait.
အခု အက်မင် ပြောင်းပြပေးသွားတဲ့စကားလုံးတွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှာတင်မက နေ့စဉ်အရပ်သုံးစကားမှာ သုံးလို့လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူးနော်။ အရပ်သုံးစကားကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ သုံးရင်သာ ပြဿနာရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ်သုံးစကားတွေမှာ ဒီစကားလုံးတွေကို အစားထိုးပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း လေ့ကျင့်သွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထပ်ပြီး အကြံပေးလိုတာက လုပ်ငန်းခွင်မှာ စကားပြောတဲ့အခါ ပိုပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၊ တိုတိုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပိုထိရောက်တဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးပါ။ ဒါ့အပြင် စကားကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ ဒါမှ တစ်ဖက်လူနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။
References : Fluentu , Espresso English
သူလညျးနားလညျ၊ ကိုယျလညျး နားလညျရငျ ပွီးရော မဟုတျဘူးလား
ယောငျးတို့ရေ အခု အကျမငျတို့ လလေ့ာနကွေတဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားဆိုတာ
အခငျြးခငျြး ဒါမှမဟုတျ နိုငျငံခွားသားနဲ့ အပွနျအလှနျပွောဆိုတတျရုံ အဲဒါလေးတငျအတှကျ သုံးကွတာ မဟုတျပါဘူးနျော။ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှမှောဆို ကွားခံဘာသာစကားအနနေဲ့ ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးနကွေတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျဟာ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို အရပျသုံးစကား (သူနားလညျ ကိုယျနားလညျ အပွနျအလှနျ ပွောဆိုတတျရုံ) မဟုတျဘဲ တကယျ့ကို ပရျောဖကျရှငျနယျကကြ ပွောတတျဆိုတတျဖို့လညျး လိုလာပါပွီ။ ဒါမှသာ လုပျငနျးခှငျမှာ ပိုပွီး အခှငျ့အလမျးတှရေနိုငျမှာပါ။
အရပျသုံးစကား ပွောနကေရြာကနေ ပရျောဖကျရှငျနယျ စကားပွောတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ရတာကလညျး အရမျးခကျလှတယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျသုံးနကြေ စကားလုံးတှေ နရောမှာ တဈလုံးစ နှဈလုံးစ အစားသှငျးပွီး လကေ့ငျြ့သှားရုံပါပဲ။
ဥပမာကှာ သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြးတှကွေ့ရငျ “hey” လို့ပွောကွပမေဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ကိုယျ့ရဲ့ စီးပှားဖကျပါတနာတှနေဲ့ တှတေဲ့အခါ “Hello” လို့ ပွောငျးပွောတာမြိုး၊ “okay” အစား “all right” လို့ သုံးတာမြိုးပေါ့။
ဆိုတော့ ဒီတဈပတျမှာတော့ အကျမငျက ယောငျးတို့ အရပျသုံးစကားမှာ သုံးနကေစြကားလုံး (၆)လုံးကို ပရျောရှငျနယျကကြ ဘယျလိုပွောငျးသုံးရမယျဆိုတာလေးကို ရှငျးပွပေးထားပါတယျ။
“ဆကျသှယျသညျ” လို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။ (၂) ခုလုံးကို အရပျအင်ျဂလိပျစကားပွောရော၊ ပရျောဖကျရှငျနယျလျ အင်ျဂလိပျစကားပွောရောမှာ သုံးလရှေိ့ကွပမေဲ့ ပရိုကကြရြေးတော့မယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ ပိုတိုပွီးတော့ အဓိပ်ပာယျပိုထိရောကျတဲ့ “contact” ကိုသုံးကွပါတယျ။
အသိပေး၊ အကွောငျးကွားသညျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ “Let (someone) know” ကို ပရျောဖကျရှငျနယျအင်ျဂလိပျစကားပွောမှာ အသုံးမြားကွပမေဲ့လညျး အရေးသားဆိုရငျတော့ “inform” ကိုသာ သုံးကွပါတယျ။
သခြောအောငျလုပျသညျလို့ အဓိပ်ပာယျ ရပါတယျ။ စကားလုံး (၂) လုံးစလုံးကို အခွနေေ (၂)ခုစလုံးမှာ သုံးလို့ရပါတယျ။ သိပျပွီး ကှာခွားသှားတာမရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး ပရျောဖကျရှငျပိုဆနျခငျြရငျတော့ အရေးမှာ “ensure” လို့သာ သုံးစခေငျြပါတယျ။
Related article >>> တဈယောကျတညျးရော အင်ျဂလိပျစကားပွော လကေ့ငျြ့လို့ရနိုငျလား?
သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး (သို့) ရငျးနှီးသူအခငျြးခငျြး ဟဲ့ ငါတို့သှားတော့မယျ အဆငျသငျ့လုပျထားလို့ ပွောတဲ့အခါ “Get Ready” လို့ ပွောတတျကွတယျမလား။ ဒါပမေဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျလျ စကားပွောနဲ့ အရေးမှာဆိုရငျတော့ “prepare” လို့သာ သုံးကွပါတယျနျော။
သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး အကွောငျးအရာတဈခုခုကို တိုငျပငျဆှေးနှေးခငျြတဲ့အခါ “talk about” ကို သုံးကွပမေဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျမှာဆိုရငျတော့ “discuss” လို့သာ သုံးကွပါတယျ။ သတိထားရမှာတဈခုက “talk” နောကျမှာ “about” လိုကျပမေဲ့ “discuss” နောကျမှာတော့ “about” မလိုကျရပါဘူးနျော။ ဒါကို တျောတျောမြားမြားက ” I would like to discuss about ….” စသဖွငျ့ သုံးနကွေတာ တှရေ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ “talk TO someone ABOUT something” နဲ့ “discuss something WITH someone” လို့သုံးရတာကိုလညျး သတိထားရပါမယျနျော။
တောငျးပနျပါတယျလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ “say sorry” ကို ကလေးတှကေို ပွောတဲ့အခါ သို့ တခွား အခငျြးခငျြး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပွောကွတဲ့အခါမှာ သုံးကွပမေဲ့ လုပျငနျးခှငျအတှငျးမှာ သုံးဖို့ကြ အရမျး ပရျောဖကျရှငျနယျမဆနျရာကပြါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အရေးမှာဆိုတော့ apologize” ကိုပဲ သုံးကွပါတယျ။
အခု အကျမငျ ပွောငျးပွပေးသှားတဲ့စကားလုံးတှကေို လုပျငနျးခှငျမှာတငျမက နစေ့ဉျအရပျသုံးစကားမှာ သုံးလို့လညျး ပွဿနာမရှိပါဘူးနျော။ အရပျသုံးစကားကို လုပျငနျးခှငျမှာ သုံးရငျသာ ပွဿနာရှိတာပါ။ ဒါကွောငျ့ နစေ့ဉျသုံးစကားတှမှော ဒီစကားလုံးတှကေို အစားထိုးပွီး တဖွညျးဖွညျးခငျြး လကေ့ငျြ့သှားဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ပွီးတော့ ထပျပွီး အကွံပေးလိုတာက လုပျငနျးခှငျမှာ စကားပွောတဲ့အခါ ပိုပွီး ရိုးရှငျးလှယျကူ၊ တိုတိုနဲ့ အဓိပ်ပာယျပိုထိရောကျတဲ့ စကားလုံးတှကေို သုံးပါ။ ဒါ့အပွငျ စကားကို ဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျ၊ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးပွောပါ။ ဒါမှ တဈဖကျလူနားလညျမှာဖွဈပါတယျ။
Tagged casual, Knowledge, language, professional, Sunday English
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ကုန်သွားတဲ့အခါ အစားထိုးနည်းလမ်း(၁၀)ခု
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ရုတ်တရက်ကုန်သွားတယ်လား…ဒီလိုအလွယ်တကူ အစားထိုးသုံးလို့ရတယ်နော်။
Posted on October 13, 2017 October 13, 2017 Author Myat Lay
ကလေးလေးတွေရဲ့ လုပ်ဆာင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးတာဟာ သူတို့အတွက်ရှေ့ခြေလှမ်းတွေ အတွက် အားတွေပါပဲ။
အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်သည့် အော်တိုအင်မြူးရောဂါ (၇)မျိုး